Nhau - Chii chiri kuitika neiyo iPhone12 MagSafe magnetic isina waya kuchaja
Kubva iyo iPhone 8 muna 2017, Apple yakawedzera isina waya yekuchaja basa kune ese iPhone mamodheru, iyo yakafanana nenzira isina waya yekuchaja nzira yemamwe mafoni, uye inotanga kuchaja kana yaiswa pane isina waya charger. Apple ine tarisiro nezve iyo isina waya yekuchaja basa, asi kutaura chokwadi kuti waya isina waya inovimba nekuenderana kweyekutumira coil uye iyo inogamuchira coil. Tsika dzisina waya dzemajaha hadzigone kuwana mibairo yakanaka kana yaiswa padhuze. Kana akaiswa zvisirizvo, kugona kwechaji isina waya kuchaderedzwa uye simba racho harizowedzere. , Inononoka kuchaja, kupisa kwakanyanya, nezvimwewo, zvinotadzisa kukura kwechaji isina waya uye kuunza zvakashata ruzivo.
Kutanga kubva kukonzeresa, Apple yakaunza iyo nyowani MagSafe magineti yekuchaja tekinoroji kugadzirisa zvakashata chiitiko chetsika isina waya kuchaja. Iyo iPhone 12 nhare mbozha, peripheral accessories, uye charger zvese zvakagadzirirwa neMagSafe magnetic zvikamu kuti zvibudirire mhedzisiro yekumira otomatiki uye kuenderana. iPhone 12, ese ari maviri iPhone12 mini uye iPhone12 Pro yakagadzirirwa iyo nyowani yeMagSafe magnetic yekuchaja tekinoroji.
Sezvinoonekwa kubva pakuona kwe iPhone12, MagSafe magnetic kuchaja system chikamu chimiro, yakasarudzika coil yekumira yakakura kugamuchira simba, kutora magineti flux kuburikidza neanocrystalline pani, uye kutora inovandudzwa inodzivirira dura kuti ive yakachengeteka kugamuchira isina waya inokurumidza Recharge. Dense magineti emagetsi akasunganidzwa padivi peiyo isina waya inogamuchira coil kuti ione otomatiki kuenderana uye kushambadzira nemamwe magineti zvishandiso, nokudaro ichivandudza kusagamuchirwa kwekutambira. Yakashongedzerwa neyemagetsi-inonzwisisika magnetometer, inopindura nekukurumidza kuchinjiro mune inokonzerwa nemagineti masimba esimba, ichibvumira iPhone12 kuti ikurumidze kuziva magineti accessories uye igadzirire isina waya kuchaja.
Sezvo iyo iPhone 8 yakashongedzwa ne7.5W isina waya kuchaja, iyo isina waya yekuchaja simba yeiyo yapfuura iPhones yakamira pa7.5W. MagSafe yemagineti yekuchaja tekinoroji inowedzera kaviri waya isina waya yekuchaja, iine simba rakakura re15W.
Pamusoro peMagSafe yemagineti kuchaja, iyo yese iPhone12 nhevedzano ichiri kutsigira Qi isina waya kuchaja ine huwandu hwakawanda hwakawanda, ine simba rinosvika 7.5W. Vashandisi vanoda kumhanyisa kumhanyisa kumhanya vanokwanisa kushandisa yekutanga MagSafe magineti charger, uye maQi waya asina waya ayo akaparadzirwa zvakanyanya pamusika anogona kuramba achishandiswa.